Inona no hatao raha matahotra ny olona ny alikako | Tontolo alika
Inona no hatao raha matahotra olona ny alikako
Ny alika izay niara-niaina tamin'ny olona izay tsy afaka nanabe azy tsara, dia matetika no manana olana ara-tsosialy maro. Saingy tsy ireo izay iharan'ny herisetra ihany no afaka mitombo nefa tsy mahafantatra ny fomba hifandraisany amin'ny hafa karazana aminy na amin'ny olon-kafa, fa ireo izay voaaro loatra koa. na izany na tsy tena ilaina tokoa ny miara-miasa amin'ny volony mba hamerenany ny fahatokisany azy ary afaka, manao fiainana ara-tsosialy ara-dalàna.
Ka raha manontany tena ianao inona no hatao raha matahotra olona ny alikakoHiresaka momba ny antony sy ny vahaolana mety hitranga isika ato amin'ity lahatsoratra ity.
1 Fa maninona ny alika no matahotra olona?
2 Inona no atao mba hampijanonana ny alikako tsy hatahotra olona?
Fa maninona ny alika no matahotra olona?
Ny alika dia afaka mahatsapa tena tahotra ny zanak'olombelona rehefa nampijaliana izy, na rehefa tsy dia nifandray tamin'izy ireo izy. Amin'ny tranga voalohany, nampifandraisin'ny olona amin'ny zavatra ratsy (fanararaotana ara-batana sy / na am-bava, izany hoe, kiakiaka tsy tapaka); amin'ny faharoa, satria saika tsy nifandray tamin'izy ireo izy, tsy hainy ny mifampiresaka, noho izany dia mahatsiaro ho tsy azo antoka izy eo imason'izy ireo.
Ity tahotra ity dia mety hiseho tsy ho ela, avy amin'ny alika kely, ary tahotra izay matetika no maharitra ela vao hanjavona, ka raha manana alika matahotra ianao, tena ilaina ny manomboka miasa miaraka aminy faran'izay haingana.
Inona no atao mba hampijanonana ny alikako tsy hatahotra olona?
Ny zavatra voalohany indrindra dia hajao ary karakarao. Tsy tokony hikapoka azy isika, na hiantsoantso azy, na hampijaly azy amin'ny fomba hafa. Tsy mila manery azy koa ianao, satria raha tsy izany dia hihamafy ny tahony. Mba hahazoana alika matahotra hiaina fiainana ara-dalàna, zava-dehibe ny itondran'ny olona anao tsara, manolotra azy hitsaboana alika.
Isaky ny misy mpitsidika anao dia angataho izy ireo hanome sakafo ho an'ny volonao. Ary raha mandeha mitsangatsangana ianao, Atolory azy isaky ny mahita olona manatona ny lane-nao ianao.
Raha mandalo ny fotoana ary tsy mahita fanatsarana ianao, aza misalasala mifandray amin'ny mpampiofana alika iray izay miasa tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Inona no hatao raha matahotra olona ny alikako
Ireo bibikely mampidi-doza indrindra ho an'ny alika
Sarin'i Elliott Erwitt